DAAWO: TPLF oo ciidamada Itoobiya dib uga riixay goobo muhiim ah & Wararkii u dambeeyey.
November 19, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 1
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Inkastoo labada dhinac ee ku dagaalamaya gobalka Waqooyiga ee dalka Itoobiya ay kala sheeganayaan guulo dagaal, haddana maanta ayaa la rumeysan yahay in uu dhacay mid kamid ah duulaamadii ugu cuslaa ee dhinacyada dhexmara, labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaana ahaa xiliyada culus ee ay dhaceen dagaaladu.
Ciidamada Tigree-ga oo subaxnimadii hore ee saaka duqeyn Isdaba joog ah uga imaanaysa kuwa Milateriga Itoobiya ayaa galabnimadii maanta ku guuleystay in ay madfac ku dhuftaan mid kamid ah saldhigyada ay 2 maalin kahor dageen ciidamada Itoobiya ee kuyaala magaalada Alamata ee gobalka Tigree-ga.
Sida ay sheegatay TPLF waxay dishay ku dhawaad 2000 Askari, iyadoo burburisay hub culus sida uu sheegay hadal -hayeen cusub oo u hadlay TPLF, waxayna sheegteen in guushan dagaal ay ka dhigan tahay tii ugu weyneyd, laakiin sheegashadooda ma jirto wax cadeymo ah oo ay keenen.
Sidaas oo kale Milateriga Addis Ababa ayaa sheegtay in ay horey u durkeen lana burburiyey saldhigyo muhiim ah oo ay lahaayeen TPLF, laakiin ayana sheegashadooda lama hayo cadeymo ku filan, marka laga tago afkooda.
Labada dhinacba waxa la qariyaa in ay askar badan iskaga dhimatay 48 saac ee lasoo dhafay, waxaana wararka madaxa banan ee ka fog aagaga dagaalka ay sheegayan in aysan ka yareyn 1500 Askari in ay dhinteen labo maalin dagaaladii socday.
Addis Ababa ayaa sheegtay in ay soo afjarayso duulaanka ka dhanka ah TPLF oo ay burburinayso, waxay ugu yeertay in ay kasoo horjeedaan Amniga & kala dambeynta Itoobiya laakiin howlgalkan ayaa qaatay todobaadkii sadexaad oo ay rasaastu dhacayso.
Hadan ka hadlo Rayigeyga 2 Qolo wa isku dhamaden tasna wax maslaxad ah uguma jirto 2 qolo oo Diriraysa,R/wasaraha itoobiya 2 sano aya ladortay markay dhamatay 2 sano waxa larabay in dorasho itoobiya udarerto,ma dhicin tasi waxuu shegay in karono vayris jiro aandorasho dhacan Tegreydu waxay shegtay in aay tas ka biyo diday,sidas aya dagalka kentay,waxas in lagu dhamado masharciba? mase laga fa’iiday?